झनै टाइट भो तरलता, निर्वाचन खर्च कहाँ गयो ? - Tree Media News
झनै टाइट भो तरलता, निर्वाचन खर्च कहाँ गयो ?
काठमाण्डौ । संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको खर्चका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा असर परेको छ ।
निर्वाचन आयोग, सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेको र उक्त रकम बैंकिङ च्यानलमा नआइसकेका कारण पनि तरलतामा चाप परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले निर्वाचनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तवरले खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप परेको जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रनिनिधिसभाको निर्वाचनमा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार भएको अनुमान गर्नुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा खासै परिवर्तन नआएकाले पनि निर्वाचनमा भएका खर्च औपचारिक नभएको बताउनुभयो ।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्जा प्रवाह बढेको छ, निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा अझै आएको छैन ।”
निर्वाचनमा भएको खर्चको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले निर्वाचनमा सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेका खर्च बैंकिङ च्यानलबाट गएको बताउनुभयो । तर राजनीतिक दलले गरेको खर्च अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित छ ।
Previous Postयूट्यूवलाई टक्कर दिन आयो फेसबुकको भिडियो वेबसाइटः अहिले दर्ता, भविष्यमा कमाईPrevious Post
Next Post‘गृहमन्त्री पाए ३ महिनामै आधा अपराध घटाउँछुु’Next Post